> Resource> Utility> ike izipu ma ọ bụ Anata Text Ozi - Idozi Nsogbu
Ọtụtụ mmadụ na-arịọ "Ntak apụghị m izipu ozi ederede ma ọ bụ nwere ike agaghị enweta ozi ederede na iPhone" na discussions.apple.com. N'ezie, e nwere ọtụtụ ihe mere nwere ike ime ka nsogbu ahụ. Ọ bụrụ na ị na-ezute nsogbu, ị kwesịrị ị chepụta mere na ị gaghị zipu ma ọ bụ na-enweta ozi ederede site na iPhone na ịmụta nri ngwọta.
Mgbaàmà 1: Ị nwere ike agaghị enweta SMS ma ọ bụ ozi ederede ebe ị na Switched gị iPhone na-abụghị Apple ekwentị, dị ka Android, Windows, ma ọ bụ BlacBerry ekwentị.
Ngwọta: Ma ị na-eme atụmatụ ịzụta ọhụrụ ndị na-abụghị Apple ekwentị ma ọ bụ na ị zụta otu, iji zere ghara inwe ike na-enweta SMS ma ọ bụ ederede ozi, ị kwesịrị ị na gbanyụọ ma ọ bụ deactivate gị iMessage. Ma, ndị na-iPhones ga na-eji iMessage izipu ozi ederede ka nọmba ekwentị gị, nke na N'ihi ga-eme ka ị na-atụ uche ozi ederede. Lee ndị ụzọ agbanyụ (deactivate) iMessage:
* Ọ bụrụ na ị ka nwere gị iPhone na aka gị na-adị irè SIM kaadị, mgbe ahụ, tinye kaadị SIM n'ime gị iPhone> n'aka na gị iPhone> pịa Ntọala> Ozi> swipe iMessage ka Gbanyụọ.
* Ọ bụrụ na ị na-adịkwaghị nwere gị ochie iPhone na aka ma ọ bụ SIM maka iPhone agaghịkwa na-arụ ọrụ, na-emeghe Apple si ukara selfsolve webpage na kọmputa gị, Tinye nọmba ekwentị gị na-nkwenye koodu> itinye nkwenye koodu na igbe.
Mgbaàmà 2: Ị ka nwere ike agaghị enweta ihe ọ bụla ozi ederede site na iPhone ọrụ
Ngwọta: Ọ bụrụ na ị na-agbalị n'elu kwuru banyere ụzọ na-deregister gị iMessage, ma ka na-apụghị inweta ozi ederede site na iPhone ọrụ, karịsịa mgbe iPhone onye ọrụ na-eji ihe dị ochie mkparịta ụka iji zitere gị a ederede, ị kwesịrị ị na-arịọ ya ma ọ bụ ya na-amalite a ọhụrụ mkparịta ụka iji zitere gị ozi. Iji nweta ya malitere, ọ ga ihichapụ ẹdude mkparịta ụka mbụ.